The Essay Typer-Essay For Sat Score The Best Graphic Design Shareware For Non Professional That Needs To Be Developed In November 2020 Short Essay On Value Of Self Discipline Expert Explanation where to get New PS2 ROMs for iOS Devices | Exclusively Friends with benefits for beginners: how to get some withasexy lady after the first met? Hookup advice
राजु पुडासैनी विश्वभर- मार्क्सवादी दर्शन अन्तर्गत सर्वहारा-श्रमिकको मुक्तिको आन्दोलन अब उठ्न सक्दैन! कम्युनिस्ट आन्दोलन अब उठ्न सक्दैन भन्ने परेको छ। अब क्रान्ति उठ्न सक्दैन भन्ने निकै लाई लागेकै छ। जसले भौतिकवादी बिचारधारा र सिद्धान्त पक्डेर
उदयराज खड्का प्रजातन्त्र राजनीति गर्ने एउटा सिद्धान्त मात्र होइन, यो त केवल जीवन यापनको एक छुट्टै परिपाटी पनि हो । प्रजातन्त्रवादी व्यक्तिको जीवनको प्रत्येक दिनमा, प्रत्येक कदममा, हरेक बोलीबचन वा व्यावहारमा प्रजातन्त्रको छाप हुनुपर्छ ।
बिबिसी भारतको जम्मू-कश्मीरमा भएको आतंककारी हमलामा राजस्थानका रोहिताश लाम्बाले पनि ज्यान गुमाए । उनको घरमा रुवाबासी चलिरहेको छ । उनको डेढवर्ष अघि मात्रै विवाह भएको थियो । तीन महिना पहिले उनको पहिलो सन्तानका रुपमा छोरीको
रारा अर्थात रानी
The winter is frozen to two feet in the Raratala.
मनाङको नेस्याङ गाउँपालिकाका कान्छा गुरुङ चौँरीको दुध दुहुँदै । तस्बिर : रासस
हामी त राष्ट्रिय झण्डा
गोरखाको एघारकिलोस्थित सन्त जोसेफ स्कूलका विद्यार्थीहरु राष्ट्रिय झण्डाको आकृति बनाउँदै । तस्बिर : रासस
घुम्दै – रमाउदै
भक्तपुरको नगरकोटमा दृश्यावलोकन गर्न पुगेका आन्तरिक पर्यटक । तस्बिर : रासस
धान्य पूर्णिमाको अवसरमा नुवाकोटको दुप्चेश्वर महादेव मन्दिरमा दर्शन गर्नका लागि लामबद्ध भएका भक्तजनहरु । तस्बिर : रासस
राजु पुडासैनी विश्वभर- मार्क्सवादी दर्शन अन्तर्गत सर्वहारा-श्रमिकको मुक्तिको आन्दोलन अब उठ्न सक्दैन! कम्युनिस्ट आन्दोलन अब उठ्न सक्दैन भन्ने परेको छ।
छक्क बहादुर बिष्ट एउटा सचेत र स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले पशुपति शर्माको गितको समर्थन गरौँ राजनीतिक अाग्रह पुर्बाग्रहबाट समर्थन नगरौं। गितलाई,
उदयराज खड्का प्रजातन्त्र राजनीति गर्ने एउटा सिद्धान्त मात्र होइन, यो त केवल जीवन यापनको एक छुट्टै परिपाटी पनि हो ।
मुम्बई । शिब सेनाका नेता, नेपाली श्रमिक मजदुर युनियन भारत तथा नेपाली कामगार सेना भारत प्रमुख मास्टर थापाले जनताको चाहनाअनुसार संविधानमा रहेका त्रुटी सच्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले संबिधान संसाेधन गरेर, उबेला सुझाव संकलनका क्रममा आएका जनमतको सम्मान गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। “विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्रका रूपमा चिनिएको नेपाल तीन थप पढ्नुहोस
वामदेव गौतम, एमाले उपाध्यक्ष दुई ठूला कम्युनिष्ट घटकबीच एकताको दिन नजिकिँदैछ । यसका मुख्य सूत्रधार एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमचाहिँ राजनीतिक दृश्यमा अहिले ओझेल छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव हारे । अन्तर्घातै पनि भयो भनिन्छ । तर, प्रदेश पार्टी कमिटीले गठन गरेको छानवीन समितिले अहिलेसम्म दोषी किटान गरेर कारवाही गरेको छैन
राजु पुडासैनी विश्वभर- मार्क्सवादी दर्शन अन्तर्गत सर्वहारा-श्रमिकको मुक्तिको आन्दोलन अब
उदयराज खड्का प्रजातन्त्र राजनीति गर्ने एउटा सिद्धान्त मात्र होइन, यो
दीपक मनाङ्गेले भने: म अाेली-प्रचण्डकाे सदस्य हाेइन !
छक्क बहादुर बिष्ट एउटा सचेत र स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले पशुपति
गणेश सिंह पुजारा सबैका अा-अाफ्ना बिचार छन्। मेरा पनि बेग्लै
तस्बिरमा हेर्नुहोस्, पत्रकार महासंघ रोल्पाको होली मिलन
होलीको अवसरमा बिहिबार दिनभर माडीचौर रोल्पाको खेलकुद मैदानमा रमाईलो भयो । कार्यक्रमको आयोजना नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रोल्पाले गरेको थियो । होली मिलन तथा बनभोज कार्यक्रममा संचारकर्मी, राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि, नागरिक अगुवाहरुको सहभागिता थियो । तस्बिरमा हेर्नुहोस्, पत्रकार महासंघ रोल्पाको होली मिलन
सिंहदरबारभित्रै चोरी, कर्मचारी पक्राउ
काठमाडौं । कर्मचारीले नै सिंहदरबारभित्रका गाडिको टायर चोरी गरेको खुलेको छ । चोरी भएका टायर बरामद गरी चोरीमा संलग्न सरकारी चालकमाथि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । शनिबार चोरी भएका चारै वटा टायर प्रहरीले शंखमुलस्थित बराही टायर सेन्टरबाट बरामद गरेको छ । सिसिटिभीको आधारमा अनुसन्धान गरी चोरी घटना पत्ता लागेको हो
प्रदेश ७ को समृद्धिका लागि देउवासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छु : रावल
गोविन्द कुँवर अछाम । साँफेबगरमा मंगलबार वाम गठबन्धनले विजयसभाको आयोजना गरे । साँफेबगरको सभामा एमाले उपाध्यक्ष तथा अछामबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य भीम रावलले सम्बोधन गरे । सभामा बोल्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता रावलले निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतका आधारमा अबको केही दिनमै बाम गठबन्धनको सरकार बन्ने बताए । बाम गठबन्धनको नेतृत्वमा
पुर्ब-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गरिने भएको छ। दुई लेनको सडक साढे तीन वर्षभित्र चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। यो सडक विस्तार गर्न सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) ले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ठेक्का पाउने कम्पनीले ४२ महिनामा विस्तार
रोल्पा । स्याउ भन्ने बित्तिकै धेरैले भारतको सिम्लालाई सम्झिन्छन्, जहाँ हजारौं
एक अर्बभन्दा बढि लगानीका सेवामूलक कम्पनीहरु पब्लिक बनाउनै पर्ने
काठमाडौं । एक अर्बभन्दा बढि लगानीका सेवामूलक कम्पनी अनिवार्य शेयर
वामदेव गौतम, एमाले उपाध्यक्ष दुई ठूला कम्युनिष्ट घटकबीच एकताको दिन
यदि, उच्च ओहोदामा बस्ने नीति निर्मातामध्येका केही सम्हालिए, देशको चिन्ता
काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट सोमबार दुई मन्त्रीले मात्र सपथग्रहण गर्ने भएका छन् । एमालेका एक शीर्ष नेताका अनुसार महासचिव ईश्वर पोखरेल र डा. युवराज खतिवडाले सपथग्रहण गर्ने भएका छन् । खतिवडा अर्थमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ ।
सुकिदहको नाम र केन्द्र परिवर्तन
यस्तो देखियो टुँडिखेलमा सोनाम ल्होसारको
मगर र थारुले काठमाडौंमा यसरी
पृथ्वी जयन्तीमा राप्रपाको चियापानमा देखिएको
विपक्षीको जनप्रदर्शनमा जे देखियो… (फोटो
काठमाडौं । आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीप अन्तरगत केन्यासँगको दोस्रो खेलमा
नेपाललाई १५६ रनको लक्ष्य
अल्ट्रा म्याराथन धाविका मीरालाई २८ लाखसहित सम्मान
नेपाल आईडल सिजन २ का विजेता रवि ओड कान्दिवली र पुनामा अाउने
मुम्बई । नेपाल आईडल सिजन २ का विजेता रवि ओडको
पशुपति अाउने बाबाहरुकाे चर्तिकलामा कडाइ गराै।
गणेश पुजारा हामी हिन्दु हरूको महान पर्व महाशिवरात्रि मा पशुपतिनाथ
मुम्बईकाे चर्चाले, सुदुरपश्चिम कै तारा बनिन् कान्छी माेडेल बाेहाेरा
जब भेदभाव अन्त्य हुन्छ तबमात्रै समाजकाे स्वरुप बदलिन्छ
“हामीले सिकाएको बाटाेमा हिड, तर हामीले गरे जस्तो नगर” – जन्मभुमि भन्दा कर्मभुमिमा लाेकप्रिय र दिनानुदिन, नेपालीहरुका सारथी बन्दै अाएका – कल्लु मामा मुम्बईमा भेटिने जाे-काेहि नेपालीलाई भनिरहेका हुन्छन् । सानै उमेरमा पैसा कमाउने हुटहुटि
कहाँ गए दर्शक : किन चलेनन् गोपी,
जयकिशन बस्नेतकाे हिराे नं. वानले मच्चाउने भयाे
माेडल साेनु पाैडेल
काठमाडौं । पर्वत घर भई काठमाडौंको एक कलेजमा स्नातक पढ्ने
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अब प्रयोगकर्ताको आर्थिक अवस्था कुन हैसियतको हो
जिल्ला अस्पताल रोल्पाको आधुनिक भवन बन्ने
सायद यो कुरा ठीकै हुन सक्छ, किनभने विवाहितले जस्तो एकल
कतिपय मानिस हरेक साँझ एक गिलास रेड वाइन पिउँदा मुटु
साझा सवालः बर्षमानले जवाफ दिन
मन्त्रीले मुखको खैनी हातमा थुके,
ओली भन्छन– मलाई राजा बनाउँछन
सिके लालको आरोप : महेन्द्रले
जीवन सम्राट विवेकशील साझा पार्टी नेपाली समाज रुपान्तरणकाे संवाहक हाे।
जीवन सम्राट परिवर्तन सम्भब छ। समाज बदल्ने बाटाे विवेकशील साझा
बिबिसी भारतको जम्मू-कश्मीरमा भएको आतंककारी हमलामा राजस्थानका रोहिताश लाम्बाले पनि
प्रदीप ज्ञवाली बिना विभागीय मन्त्री बन्दै